Ny zo sy adidin'ny ankizy iray ao amin'ny toby
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ny zo sy adidin'ny ankizy iray ao amin'ny toby
Namaky 7 aho
Amin’ny maha-ray aman-dreny antsika dia manahy mandrakariva ny amin’ny fivoaran’ny zanatsika isika. Tianay foana ny hahita azy ireo hanana karazana zavatra tsara indrindra araka izay tratra. Tsy afaka mampianatra azy rehetra izany anefa ny sekoly. Misy fotoana izay ilain'ny zanatsika miaina irery sy mahatsapa ny mety ho vitany. Izany indrindra no antony nananganana ny Kids Camp.
Newtonshow: The Science Camp any Singapore
Fantatsika rehetra fa ny ankizy dia liana sy mientanentana foana amin'ny fikarohana. Tena tia fikaroka izy ireo, ka mety hiteraka korontana mihitsy mba hahazoana izay tadiaviny. Amin’ny maha-ray aman-dreny antsika anefa, dia tsy afaka manaiky mora foana amin’izay tadiaviny isika, indrindra rehefa tsy mety aminy izany. Miaraka amin'ny Kids Camp any Singapore, dia hanana ny traikefa ilainy tokoa izy ireo hanatanterahana ny fivoarany.
Voalohany indrindra, ny tobin'ny Ankizy no iarahan'ny ankizy hianatra karazana zavatra samihafa. Io no toerana ahafahan'izy ireo mamorona namana tsara, mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny natiora sy ny maro hafa. Raha mbola kely ianao vao niditra tao amin’ny toby iray, dia mety ho tadidinao fa tena mahafa-po ny mandrehitra afo amin’ny tenanao voalohany. Mety nisy fotoana nianaranao nilomano tao anaty rano Toby siantifika any Singapore. Hitanao àry fa fonosana traikefa lehibe ilain'ny ankizy tsirairay izany.
Nahoana ianao no tokony hatoky ny toby Siansa any Singapore
Voalohany indrindra, ny Kids Camp any Singapore dia mety tsy dia lehibe toy ny sekoly mampianatra ny equation sy ny fitsipi-pitenenana. Tsy toerana hampianarana teny milazalaza. Na izany aza, toerana iray hampivelarana ny toe-tsaina, ny siansa ary ny fivoaran'ny zanakao. Mety tsy afaka manao fianarana akademika lalina ny toby, fa mampianatra ny hasina sy ny soatoavina ary ny filozofia. Noho izany, azonao atao ny misalasala manankina anay amin'ny fampandrosoana manokana ny zanakao.
Amin'ny lafiny iray, raha misalasala ianao amin'ny fidirana amin'ny zanakao ao amin'ny Tobin'ny Ankizy noho ny fiarovana, dia tsy misy zavatra tokony hatahoranao. Azafady, tadidio fa ny toby dia natao manokana ho an'ny ankizy - noho izany dia tsy misy loza sy loza mety hatahoranao. Misy mpiasa ampy hikarakarana sy handraisana ny ankizy tsirairay. Ankoatra izany, tsy karazana mpiasa fotsiny izy ireo, fa manam-pahaizana manokana. Ny mpiasa ao amin'ny toby dia voaofana tsara amin'ny fitarihana ny karazana ankizy rehetra.
Inona no zo sy adidin'ny ankizy iray ao amin'ny toby
Koa satria mety manahy momba ny fitsaboana ny toby amin'ny zanakao ianao, dia nanomana lisitr'ireo zo sy adidin'ny ankizy ao amin'ny toby izahay mba ho azonao.
Ny toerana misy ny toby dia azo antoka
Ity dia "tsy maintsy" amin'ny karazana toby rehetra. Voalohany indrindra, tsy miomana tampoka fotsiny ny toby. Voalamina tsara ary natao ho an'ny rehetra mba hankafy ny toby tsy misy tahotra ny loza. Ny toerana misy ny toby dia ao amin'ny faritra azo antoka foana izay azon'ny mpiasa sy ny ankizy ihany. Raha ny momba ny loza ara-pahasalamana, dia misy ihany koa ny haavon'ny fahadiovana amin'ny endri-javatra ao amin'ny Kids Camp any Singapore.
Afaka maneho hevitra sy misafidy ny ankizy.
Koa satria ny lasy dia manome ny ankizy ny fampandrosoana ilaina, dia mety ny manome azy ireo safidy malalaka haneho hevitra sy hisafidy. Rehefa manao izany izy ireo, dia hieritreritra tsara kokoa ny fanapahan-kevitra rehetra raisiny. Hampivelatra fahatsapana famakafakana sy instinct mandritra ny hetsika ihany koa izy ireo. Io zo sy adidy io dia azo ampiharina isaky ny toby satria fitsipika ankapobeny.
Tokony hanaja ny hafa ny tsirairay.
Tsy sakana amin'ny fianarana ny fahasamihafana. Ao amin'ny toby dia heverina fa hisy ny fahasamihafana eo amin'ny ankizy. Mety ho samy hafa firazanana sy loko ary finoana ny sasany, nefa tsy antony tsy hanajana izany. Raha ny marina, ny toby dia hanampy ny zanakao hankasitraka ny karazana fahasamihafana rehetra ary hanaja azy ireo. Hanampy ny ankizy ao amin'ny Newtonshow hampivelatra ny hasin'izy ireo izany, fa hanampy ny taranaka ho avy momba ny tsy mety amin'ny stereotype.
Tokony hisy fampiononana.
Na dia feno hetsika ara-batana aza ny toby, dia tokony mbola hahita ny fampiononana ny ankizy. Ny tsara dia ny toby dia misy fitaovana tsara mba hanomezana fampiononana tsara indrindra ho an'ny zanakao amin'ny fomba samihafa. Mety ho ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-tsosialy mihitsy aza. Ara-batana, satria hanana trano fialofana izy ireo; Amin'ny lafiny ara-pihetseham-po, dia hanana fahatsapana firaiketam-po ao amin'ny toby izy ireo; Ara-tsosialy, satria hahita olona mahazo aina manodidina azy izy ireo.
Tokony ho tontolo iainana mahasalama izany.
Averina indray, zo fototra izany saingy iray amin'ireo tena ilaina. Ny tontolo iainana ao amin'ny toby dia tsy tokony hitondra karazana fahasosorana sy poizina amin'ny traikefan'ny zanakao. Izany no mahatonga azy io ho voalamina tsara mba hialana amin'ny karazana loza rehetra. Ary rehefa miteny hoe salama dia tsy ilaina ny haitraitra. Tokony ho faritra fampiononana fotsiny izany. Izany no antony iray ahafahanao mahazo antoka amin'ny fampidirana ny zanakao ao anaty toby.
Tokony hotohanana ny ankizy.
Tsy ampy traikefa ny ankizy, ary miankina betsaka amin’ny fanapahan-kevitry ny ray aman-dreniny. Tsy midika anefa izany fa azon’ny ray aman-dreny atao ny mampihetsika ny zanany toy ny chess. Midika fotsiny izany fa ny ray aman-dreny dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fitarihana sy hanohanana ny zanany. Amin’izay dia ho afaka hahita izay tiany eo amin’ny fiainana ny ankizy. Angamba tena tian'izy ireo ny ho mpanoratra indray andro any, na mety ho atleta. Noho izany, ny ray aman-dreny dia tsy tokony hanakana ny zanany amin'ny nofinofiny tsara fa hanohana azy ireo kosa.
Ny ankizy tsirairay dia mila miaina ny fahazazany amin'ny filalaovana sy fihinanana ny sakafo tiany. Mety hilalao ao anaty orana sy fotaka ary ahitra izy ireo mba hahatsapa ho toy ny zaza. Na izany aza, tonga ny fotoana izay ilain'izy ireo ny fanavaozana. Ny Newtonshow dia eto hanome ny fivoarana takian'ny ankizy amin'ny fikarohana, traikefa ary fiaraha-miasa.
Tsy misy zavatra mahafaly kokoa noho ny mahita ny zanatsika mihalehibe ho tonga tsara indrindra amin'ny maha-ray aman-dreny azy. Noho izany, ny fametrahana azy ireo ao amin'ny Toby dia hatao raha toa ianao ka mila mameno ny fandinihana sy ny traikefa ara-batana. Koa satria misy adidy sy zo omena azy ireo, dia tsy misy tokony hatahorantsika. Ny fiomanana amin’ny fandraisana azy ireo ihany no ho eritreretintsika.